Ukuvikelwa ekushiseni kwelanga nemiphumela yalo - indlela yokuzivikela
Isivikelo ekubhekaneni nokushiswa kwelanga nemiphumela yayo
Uma usuba i-lobster
Isikhathi sasehlobo yisikhathi seholidi kanye nethuba elikhulu ukwenza zonke izinhlobo zemisebenzi yangaphandle. Abancane nabadala akufanele bakhohlwe ukuxubha nge-sunscreen eyanele. Kodwa kungani ukuvikelwa ekubhekaneni nokushisa kwelanga kubaluleke kakhulu, kungani kufanele uvikele isikhumba sakho ekukhanyeni kwelanga kakhulu futhi ungakwenza kanjani kangcono?
Ukungabi nokuvikelwa kokushiswa kwelanga nemiphumela yayo
Imisebe ye-UV equkethe ilanga ilonakalisa isikhumba noma nini uma ivezwa isikhathi eside kakhulu. Phakathi kwezinye izinto, lokhu kungabangela ukushisa kwelanga okubuhlungu, lapho isikhumba sibe sizwela kakhulu ekucindezelweni.
Ukuvikelwa ekushiseni kwelanga
Futhi ukuphendula okwenziwe okwenziwe okwenziwe okwenziwe okwenziwe okwenziwe ukugula kuyatholakala
I-sunburns iyingozi kakhulu, kodwa ikakhulu ngoba ingabangela umonakalo wezempilo wesikhathi eside, njengengculaza yesikhumba.
Eholidini, kuyinto elula kakhulu ukuthola ukushisa kwelanga, ngoba ngokuvamile kuvamile ukugqoka endleleni.
Ngaphezu kwalokho, umuntu uvame ukukhohlwa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukushisa kwelanga ngisho nasezinkathini ezinamafu noma emthunzini oyingxenye. Ngakho-ke izinyathelo zokuzivikela ezingapheli ziyadingeka lapho uhambela amazwe afudumele. Indlela elula yokuzivikela elangeni ukugqoka izingubo ezigqoke ngokugcwele.
Ukuvikelwa elangeni kubalulekile
Ngenxa yokuthi lokhu akusijabulisi ngaso sonke isikhathi emazingeni ashisa okushisa, kufanele kube njengokukhanya nokukhanya emoyeni ngangokunokwenzeka. Lokhu akukwenzi ukuthuthumela uma uhambisa kancane. Izigqoko zelanga nazo ziyingxenye ye-wardrobe noma enye i-parasol.
Gqoka kuphela i-swimsuit, i-swimsuit noma i-bikini, kufanele usebenzise esihlalweni selanga, esine-SPF ephezulu. Kungakhathaliseki ukuthi ugcwele noma ugqoke kancane, akufanele nanini ukhohlwe izibuko zokukhanya, ukuze amehlo avikelwe emisebeni eningi ngokweqile. Uma ulandela le mithetho elula, manje ungaya eholidini!
Uma isikhumba sibomvu njenge lobster ebilisiwe, uyazi ukuthi usele ilanga kakhulu. Ngakho yini okufanele uyenze uma ikushaye kanye kanye nesikhumba sishisa futhi sizama? Izikhwama zokupholisa kanye nama-lotions ziyathuthukisa futhi zisiza isikhumba siphinde siphume.
I-Sunburn ibeka umkhawulo wenjabulo yeholide
Ngokuvamile, kunconywa imikhiqizo ene-aloe vera noma i-chamomile. Yikuphi usizo olungcono kakhulu, lusekelwe futhi kuluhlobo lwesikhumba, yingakho kungase kuzuze ukuba nekhrimu ngaphezulu ebangeni. Yini efanelwe kahle ukuphumula kobuhlungu, yi-envelope epholile noma emvula. Ngaphezu kwalokho, kufanele uphuze okuningi ukuze unciphise isikhumba esicindezelekile.
Ukuze uthole ukushisa kwelanga okulinganiselayo futhi okunzima, kunconywa ukuthola izidakamizwa eziphikisayo ezivela kudokotela. Amakhambi asekhaya ngokuvamile anconywa kuphela. Kuvame ukululekwa ukuba ugibe iQuark ezindaweni ezithintekile ngesikhathi sokushisa ilanga.
Nakuba lokhu kuphunga kakhulu kumnandi, kodwa kungabangela ukutheleleka noma ukubhekana nokugula ngenxa yamabhaktheriya akhona, okwenza isimo sibe sibi nakakhulu.
Ukuhlukumeza ngokocansi - Ukuvikelwa kanye nezibonakaliso | imfundo
Ikhasi le-Color Coloring - Selfie phambi kwesibuko
Kungani sihlephuza ngombuzo womona - umfana
Amademoni - Yiba nebhodi phambi kwekhanda lakho